Nhau - Ndedzipi nyaya dzinofanirwa kutariswa kana otomatiki kuumba mutsara marongero?
1. Kusarudzwa kwemakina makuru uye ebetsero michina yemuchina wekugadzira webhizimusi rekuumba uye marongero emutsara wekugadzira. Rudzi rwezvinhu izvo zvinonyanya kukanganiswa neiyo modelling dhizaini, senge yakajairika ivhu jecha, sodium silicate jecha uye resin jecha; modelling nzira dzekutsvagisa; simbi yechigadzirwa zvikamu, senge yakakandwa simbi uye yakakanda simbi; Kukanda saizi uye zvinodiwa zveinotonhora system nguva; kurasa kugadzirwa kwemhando uye kurongeka kunogona kukanganiswa zvakananga nezvinhu zvakaita sekudiwa.
2. Fomu, kudomwa uye mashandiro emuchina wekuumba ndiwo matanho anokanganisa wiring yemutsara wekugadzira. Semuenzaniso, chero kushandisa akajairika kuumbwa muchina kana static kumanikidza kuumbwa muchina, angave ari muchina mumwe kana yuniti gungano mutsetse, kugadzirwa, michina uye michina, nezvimwewo, Izvo zvinonongedza zvakananga sarudzo yemuchina webetsero uye marongero e mutsetse wekugadzira.
3. Iyo mashandiro uye manejimendi nzira yeiyo yekugadzira tambo inokanganisa iyo dhizaini dhizaini fomu yemubatsiri michina uye dhizaini nzira yekudzidza yemhando yekugadzira, semuenzaniso, inoenderera kana yepakati.
4. Maitiro ekudzora uye manejimendi emutsetse wekugadzira uye mudziyo wekutumira wemasaini anoenderana unokanganisawo mamiriro epanzvimbo esangano remuchina wekubatsira muchina uye wekukanda wekutakura uye wiring dhizaini dhizaini yekugadzira.
5. Mamiriro ezvinhu efekitori uye zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinokanganisawo marongero emachina makuru uye ebetsero. Kugadziriswazve kwemusangano wekare kuchave nezvirambidzo zvakasiyana uye zvinodikanwa pakurongwa kwetambo yekugadzira yebhizimusi rekuenzanisira. Dzimwe nguva zvinodikanwa zvekudzivirira guruva uye kudzikisira ruzha rwezvakatipoteredza mumusangano wedu zvinokanganisawo sarudzo yemachina makuru uye anobatsira. Semuenzaniso, kunyatso kudzora ruzha, mutsetse wekugadzira haugone kushandisa iyo yekuzungunusa shaker, asi iyo dhiramu inoshusha.
Sandbox, Chinwiwa Mould Machine, Richigadzirisa vachikanda chinu, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Punch Out Muchina,